Yintoni injongo yokuqhekeza idiski enzima? Iindaba zeGajethi
Kukuthini ukusetyenziswa kokuchasana nedrive hard
Wakhe wayiva lento ka "Kuya kufuneka ukonakalise i-hard drive”Kwaye mhlawumbi awunalo nofifi lokuba bathetha ngantoni, nokuba uyazi indlela yokuqhekeza, awazi ukuba kutheni kubalulekile ukuyenza kwaye yintoni ingcinga yenkqubo yonke.
Ukuqonda ukuba kutheni kulungile ukukhusela kwi-hard drive kungcono ukuqonda ukuba isebenza njani. Ukwenza oku kunye nokuzibeka apha ngezantsi, ndikushiyela ividiyo apho sinokubona ukuba isebenza njani i-hard drive xa isebenza. Ukuba ukhe wayibona i-hard drive, uya kwazi ukuba indawo ephezulu ye-hard drive eboniswe kwividiyo isusiwe.
Kwividiyo unako jonga indawo ekubhalwe kuyo idatha, ekubonakala ngathi ifana kakhulu neDVD okanye iCD, ebizwa ngokuba yingoma, i-hard drive ineendlela ezininzi. Isiqwenga sesinyithi esihamba ngokukhawuleza sisuka kwelinye icala sisiya kwelinye yingalo yokufikelela kwaye ekugqibeleni "yintloko yokufunda" enoxanduva lokufunda idatha kumphezulu wediski.
Ngalo lonke ixesha sigcina uxwebhu, umculo, iimuvi okanye nayiphi na enye ifayile kwikhompyuter yethu, esikwenzayo kukugcina loo datha kwi-hard drive. Idatha igcinwa kuyo kodwa ngamanye amaxesha (phantse rhoqo) idatha ayigcinwa ngokuqhubekekayo kwihard drive. Kwenzeka ntoni kukuba ngenxa yeemeko ezahlukeneyo ulwazi lahlulwe kwaye ligcinwe kumaqhekeza ahlukeneyo (iziqwenga) zisasazeka ngaphezulu komphezulu wediski. Singatsho ukuba ifayile iqhekekile (yahlulwe yangamacandelo aliqela).
Xa sifuna ukufikelela kuzo, umzekelo ividiyo esinayo kwi-hard drive, intloko yokufunda mayikhangele iziqwenga ezahlukileyo eziyibhalileyo. Oku kwenziwa ngesantya esiphezulu, ukuze singaboni naluphi na uphazamiseko (okanye phantse hayi) ngelixa sibukele ividiyo.
Kodwa kuya kufuneka ukhumbule ukuba uninzi lweenkqubo ziqhuba ngaxeshanye kwikhompyuter kwaye Oku kuthetha ukuba ngelixa isihloko sokudlala sihamba ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye, ukufunda iiklip zevidiyo, eminye imisebenzi ekufuneka yenziwe yidiski enzima, bayachaphazeleka.
Ngoku uya kuqonda ukuba zonke iifayile zigcinwe ngokuchanekileyo kwidiski enzima, ukuze isihloko sokudlala sikwazi ukuzifunda ngaphandle kokuhamba kwelinye icala lomhlaba wediski uye kwelinye, inqanaba lemfuno liza kwehla kwaye ikhompyuter yakho iya kudla izixhobo ezimbalwa zokwenza umsebenzi ofanayo.
Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukukhusela i-hard drive, kuba into esiyenzayo xa siziqhekeza kukudibanisa zonke ezo nkcukacha zolwazi ezikule fayile inye (iimuvi, umculo, amaxwebhu, imifanekiso ...) Kwaye basasazeka ngaphezulu komphezulu wediski.
Khumbula, ifayile egcinwe kancinci kwi-hard drive yahlulwe, oko kukuthi yahlulwe yangamacandelo, yiyo loo nto inkqubo yoku Ukudibanisa onke amaqhekeza ayo kuthiwa kukuqhekeka.
Ngokuphazamisa ukusebenza kwehard drive siza kuphumelela ukusebenza ngcono kwikhompyuter yethu, ukuphucula isantya sokubhala kunye nokufunda kwihard drive yethu. Ukwenza oku kufuneka sisebenzise inkqubo yokhuselo.
Apha sikubonisa ezininzi Izicelo zasimahla ezisivumela ukuba sonakalise i-hard drive.
I-Smart Defrag 3. Isicelo esigqibeleleyo esivumela ukuba sonakalise i-hard drive yethu simahla. Isivumela ukuba siqwalasele inketho, Ngokukhawuleza kakhulu kwaye yenza inkqubo ngokulula kwaye ngaphandle kokwazi oko.
IAuslogics Disk Defrag Simahla. Njengoko igama libonisa, sesinye isicelo simahla esisebenza ngokuchaseneyo ngokufanelekileyo. Yintoni egqithisile inemisebenzi emininzi Ngaphandle kwesicelo esiza ngokusisiseko kwiinguqulelo zeWindows.
MyDefrag. Silugqibe uluhlu ngolunye usetyenziso, nangona ngobuhle ayibonisi kakhulu, Yenza inkqubo yokuhluthwa ngendlela efanayo kwisicelo esiza ngokusisiseko kwiWindows kwaye iyahambelana ukusuka kwiWindows 200 ukuya kwiWindows 8.1.
UKUHLAZIYIWE: Juni 2014
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Kukuthini ukusetyenziswa kokuchasana nedrive hard
Kodwa enyanisweni, kusetyenziswa inkqubo yefayile elungileyo, ukwahlulwa akufuneki kube yingxaki, zininzi iiseva ezisingatha isixa esikhulu solwazi kunye neenkcukacha ezinkulu, kwaye zinokuthatha iminyaka zisebenze kwaye zibe nenqanaba lokuqhekeka lingaphantsi kwe-1%, kunjalo, ukuba ayizizo iiseva zeWindows…. Ngamanye amagama, ukuphambuka kuyimfuneko kuphela kwiinkqubo zeFAT kunye nezeNTFS ...
Nangona kwikamva elingekude kakhulu iiHard Drives ziya kuyeka ukuba njengoko sizazi ngoku, iiyunithi ze-SSD ziya kusetyenziswa njengendawo ezingena endaweni yayo, ezingenayo le ngxaki, zisebenzisa amandla amancinci kwaye zivelise ubushushu obuncinci.
IKomoloves icacisa amanzi 😉
Ju4nch0 Ndonwabile ukukubona apha, kucacile ukuba uninzi lwezinto zehardware kunam. Kodwa into yeWindows yeyidrowa.
Xa ufomatha, ngaba iyangcolisa, okanye akunjalo?
I-Pk_JoA emva kokufomatha, idiski iya kusebenza ngokungathi ayinanto, nangona kuxhomekeke kuhlobo lokufomatha isenokugcina idatha, kodwa kwimeko iyafana kuba awuzukufuna ukuzikhusela kuba kwinqanaba lokusebenza akukho nto kwinkqubo yokusebenza.
Ukwahlulahlula kukuhambisa iifayile, ukuba ifomathiwe akukho nto yokuphinda ufuduke. Konke okugqibelele.
Ndingathi kubathengi, xa bendibuza: «Khawufane ucinge ukuba unamacwecwe ali-100 e-CD, anee-10 Series, nganye kwii-CD ezili-10. Ukuba siyazi-odola, sifumana iiCD ngaphambi!, Kulungile, Defragment, yenza into efanayo. Hlela kwakhona iifayile ukuze iPC yakho ihambe ngokukhawuleza kamva. »
Enkosi ngobhukisho 🙂
Ulwazi olugqwesileyo… lundincede kakhulu… Enkosi ku kien eskrio le !!! Imibuliso kubo bonke ..
Scofield Ndonwabile ukuba ulwazi beluluncedo kuwe. Kungekudala ndiza kuthumela ii-tutorials ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlutha i-hard drive. Konke okugqibelele.
Leyo yayiyeyona ndlela isebenzayo kwaye ilula yokuchaza inkqubo yokuchithwa kwabo babengazi ukuba yintoni ...
Kwisihloko esimalunga noko, ndiyacinga ...
Ngexesha elithile eladlulayo ngelixa bendifuna ulwazi malunga ne-boot.ini (le ukuba nemenyu ngexesha lokuqalisa i-pc yam kunye nokukhetha phakathi kwe-OS ezininzi) ndifumene ibhlog enomdla malunga nokwahlulahlulwa kweedrive ezinzima kusetyenziswa isixhobo seWindows xa kuthelekiswa Ezinye izixhobo zentengiso, kwaye ndothuswe ngumntu obhale esi sihloko wathi kungcono ukusebenzisa iWindows ukwahlula iidiski kunezinye izicelo ngenxa yesi sizathu silandelayo (endisokola kuso) emva kokwahlulahlula idiski kunye nesicelo sentengiso endisishiyileyo indawo yediski njengendawo yediski engasetyenziswanga, ukuze icace gca, ndenze izahlulelo ezibini kwaye ndasindisa isiqwenga sediski se-approx. I-7Mb engeyonxalenye yayo nayiphi na isahlulelo, hmm ayothusi.
Ngapha koko, kuba usibonisile ngombuzo wokuchithwa, mhlawumbi ungasikhanyisela ngombuzo wokwahlulahlula kunye neefomathi zokuya ezahlukeneyo zeFAT, FAT32, njl. (Ngoku ndicinga ngayo, andinawo owona isebenzisa, ndiza kuGoogle apho).
UAugus uphawule umbuzo wakho, ndinengqondo yokwenza isifundo malunga nesihloko kodwa ndiyakuqinisekisa ukuba uluhlu lweencwadi ezilindileyo lukhulu kakhulu. Ngokukhawuleza nje ukuba ndinexeshana ndiza kuthi. Konke okugqibelele.
Enkosi kakhulu malume, ikhompyuter ihamba ngokukhawuleza kakhulu kum
Ewe ndonwabile ukuba i-balta ikukhonze. Konke okugqibelele.
Ndicinga ukuba isihloko sihle kakhulu kwaye nendlela yokucacisa nayo, kuba indinika umbono ocacileyo malunga nokuchaswa.
Amandla aphakamileyo sitsho
AUGUS, ndiphendula umbuzo wakho, esi sithuba sigcina i-MBR (Master Record Record, licandelo lokuqala, "icandelo zero" ngamanye amaxesha lisetyenziselwa ukuqala inkqubo yokusebenza, ngamanye amaxesha isebenzisa ukwahlulahlula iitafile kwaye ngamanye amaxesha kuyisebenzisa ekuchongeni isixhobo , kwiinkampani ezaziwayo ezifana ne-HP, IBM, SONY, kwesi sithuba siqulathe ikopi yenkqubo yokusebenza, oku kuyilelwe kuba kufuneka uvavanyo olusemgangathweni ukubona ukuba inkqubo yokusebenza iqala ngokuchanekileyo, kufuneka bangene kwinkqubo yokusebenza Ukujonga Ekugqibeleni, inkqubo yokusebenza kufuneka ilungele umxhasi, kwaye ukusuka kweso sithuba ukufaka inkqubo yokusebenza kwakhona, ukubuyisela kwakhona indawo apho kukho isoftware ethintelweyo yomsebenzisi, esetyenziswa ziinkampani zokwenza idiski enzima, kuba njengazo zonke Yazi ukuba ii-hard drive zikhona ngobukhulu obahlukeneyo, ke kuyabiza ukwenza zonke iidrive zilingane kwaye zibonisa nje amandla afunekayo, oku okanye basebenzise le software kodwa amaxesha amaninzi umsebenzisi akayazi kodwa esi sithuba sinokufunyanwa. Ungandibuza nayiphi na imibuzo. Mholweni emini nje..
Amandla aPhakamileyo enkosi ngegalelo lakho.
enkosi loko yandikhonza kakhulu lotisimooooo !!!!!!! ngoku ... ndinerekhodi kwaye ndifuna ukuyibeka njengekhoboka, ndenza njani ??????????
Fedes ukubeka idiski njengekhoboka kufuneka ususe idiski ekhuni kwikhompyuter yakho kwaye ubeke kwindawo echanekileyo itab encinci edibanisa ezinye izihlanganisi ezikwelinye lobuso bediski enzima (apho idityaniswe khona). Ukwazi apho uyibeka khona, kuya kufuneka ujonge umzobo oyicacisa kwi-hard drive yakho (ihlala inesitikha) kwaye ubeke i-tab njengakwigrafu apho ithi ikhoboka.
Ndingathanda ukwazi ukuba ndiyazikhupha kwi-hard disk, ikhompyuter iza kuhamba ngokukhawuleza, isazi ukuba umbuzo wam ngowokuba ucima iifayile, iifoto, umculo okanye into?
Molo Noelia, andazi ukuba uza kuhamba ngokukhawuleza, mhlawumbi kukho umahluko kwisantya ongasiboniyo, kodwa kulungile kuwe kwaye yinto eyimfuneko ekufuneka uyenze amaxesha ngamaxesha ixesha, ngokweefayile "ibalalisa" (ukukuxelela into) kwaye ngekhe ucime nantoni na 😀
Ukubulisa kunye nantoni na esihamba apha
UNoelia sele ephendule uNeri ngokugqibeleleyo eri
Enkosi kakhulu ngolwazi olufundwayo, bendingenalo nofifi lokuba yenzelwe ntoni kwaye ndiyathemba ukuba izakuba ngcono, kuba kubonakala ngathi kufudlana ufudu lo udla umncinci.
Enkosi kakhulu ngolwazi lweviniga, indincede kakhulu
mike kakhulu sitsho
Ngenyanga ndibenengxaki kwi-PC yam, kubonakala ngathi iDrive Drive ithatha ixesha ukulayisha ezinye iinkqubo kodwa sele ndikhuphe iinkqubo ezininzi (i-corel, i-adobe premiere phakathi kwabanye) kwaye isacotha nje umbuzo wam ukuba Ngaba kufuneka ukhuphe idiski kanzima okanye inokuba yintoni?, ngakumbi ukuba ndiyayichitha, kukho ukulahleka kwedatha?
Imibuliso kubo bonke kwangaphambili
kwaye ndiyathemba ukuba ungandinceda !!
UMike Vallely, ngesiqhelo, ukukhupha idiski enzima kunceda ikhompyuter ukuba ihambe ngokukhawuleza, kodwa ukuba ikhompyuter yakho ithatha ixesha elide ukuqala okanye icotha kakhulu, ingxaki yenye (irejista engcolileyo yewindows, izinto ezininzi kakhulu ekuqaleni, njl.
Ngapha koko, qiniseka ukuba ukuphazanyiswa akubangeli ukulahleka kwedatha, okwenzekayo xa ufomatha kodwa ingekuko xa uzikhusela, ke gcina kulula.
I-Poez ndisakholelwa ukuba yidiski enzima, andinazinto zininzi ekuqaleni, kuthekani ukuba ndineefayile ezininzi ezinzima (700Mb ukuya phezulu) kodwa ke ndiza kuzikhusela kwihard disk avr kwenzeka ntoni!
Enkosi mhlobo ngokuphendula !! :)
Ewe ewe ibhlog elungileyo ehh !! 😉
Elinjani lona igalelo elifanelekileyo kwaye icaciswe kakuhle ^ ^ iifayile ziyaqhubeka nokwenza njalo! Umbuliso.
I-UAU PADRISIMO ENKOSI NGOKUGQIBELA NDINGENZA IZINKQUBO ZAM ZIQHELE UKULUNGELA AKUKHO BUNZIMA NJENGOKO NDANDICINGA UKUBA KODWA SEKUKHO. YINTONI EBALULEKILEYO NGUQ NDAYIFUMANA ILUNGILE… NDIHAMBE…
UKUBA UFUNA UKWAZI INTO EMALUNGA NEKHADI LOMAMA OKANYE IZAKHIWO ZIKAMAMA IKHADI:
I-PCI kunye ne-AGP Slots
I / O AMAZIKO
I-SOCKET YOKUKHUMBULA I-RAM
IINKCUKACHA ZEENKCUKACHA ZEDATA
NKANYE ... BHALA NDIZOKUXELELA ENDIKWAZIYO
APHA KWELIPHEPHA KUPHELA UKUTHETHA NGOKUTSHINTSHA IDISKI ENKULU OKANYE SINGAXOXA NGEZINYE IINDAWO ZE-PC…? ENKOSI
paulitaaa kweli nqaku sithetha kuphela ngokuzithoba. Sebenzisa injini yokukhangela engentla kolunye ulwazi.
L € @ sitsho
Heyi ndoda !!! Anjani wona amanqatha! Your .. ulwazi lwakho luhle kakhulu .. kulula ukuluqonda .. inyani yandikhonza kakhulu .. Bendiqinisekile ukuba kutheni iluncedo ekukhuseleni idiski, kodwa bendisoloko ndiyenza 😛 .. nakule nto yokuncitshiswa , Ndiyikhapha ngeCcleaner (isusa idatha engeyomfuneko) okokuqala ndiyisebenzisa ndicima phantse iigig zedatha (inkunkuma ndingathi): Q yindibaniselwano elungileyo, akunjalo? Ucinga ntoni "ngeviniga"? impambano elungileyo .. ulwazi lwakho lundikhonze, lulunge kakhulu!
imibuliso che .. qhubeka njalo! 🙂
Yindibaniselwano elungileyo kakhulu very
Ops! Iviniga, ividiyo ayisasebenzi ...
Iphulwe_Scrotum (^ _ ^)! Ndiyabulisa!
Iscrotum enkosi ngencam. Ndibeke enye ividiyo efanayo ekwalungiselela ukubonisa iposti 🙂
Enkosi ngolwazi, icacisiwe kakuhle 😀
Kukangaphi kufuneka i-hard drive ihlazeke ???
Kanye ngenyanga kulungile nangona kungekho nto yenzekayo ukuba uyenza rhoqo emva kweenyanga ezimbini okanye ezintathu.
Umbulali weviniga, ndifuna ukukubuza into eyahlukileyo:
Yeyiphi i-antivirus oyicebisayo?
ndibulisile bye !!
Ewe, akukho nto ndiyaziyo malunga noku, yiyo loo nto ndinamathandabuzo ngolu hlobo: kunokwenzeka ukuba ukuba ndithomalalisa idiski eyomeleleyo ye-pc yam oku kuya kukuchaphazela ngokuqinisekileyo ukuveliswa kwakhona kweevidiyo zakho zetyhubhu kuba umatshini wam awunayo imemori eninzi ekuqaleni kwaye oko kodwa kuyacotha kakhulu kwaye andazi ukuba oku kuphambuka kungasisombululo sesinye.
@ManolinHxC isebenzisa i-Bitdefender ehlawulelweyo okanye i-avast yasimahla (eyangaphambili ibhetele kakhulu)
@ UMartín akayichaphazeli ngqo, kodwa ukuba iPC yakho ityala imali ekuphatheni idiski enzima enokuqhekeka (nangona ngokuqinisekileyo incinci) inokuchaphazela ukusebenza kwayo nayiphi na enye inkqubo, kubandakanya nokudlalwa kweevidiyo zikaYouTube.
Andinayo nayiphi na imibuzo kodwa igalelo lomntu ngamnye kuni liyabulelwa kakhulu, ukuwolwa, ukubuya, ukusuka CHILE, MIBUZO
Imfundiso yakho icacile, enkosi uphambene ngokwabelana ngolwazi lwakho, ukwanga kwaye ngethemba lokuba ii-egoists ziyaphela. Enkosi
teh ikati felix sitsho
molo vingre ndiyathemba ukuba oku kulungile !! Ewe ndifuna ukukubuza ukuba kuyintoni ukubeka idiski enzima njengekhoboka kwaye yintoni eyenzela umatshini womelele, chaza oko kum nceda! Enkosi, ndilindele impendulo yakho !!!
Xa une-hard drive engaphezulu kwesinye kwikhompyuter yakho, kuya kufuneka ubeke enye njengenkosi kwaye abanye babe ngamakhoboka ukuze isebenze ngokuchanekileyo. Oku kufezekiswa ngokuhambisa isiqwenga (esihlala si-plastiki) kwelinye lamacala e-hard drive. Ukuba unerekhodi enye, akukho mfuneko yakwenza nantoni na.
AAAH KULUNGILE ENKOSI NGOKUCHAZA KUM NDIYABULELA !!!
Ndiyabulela kakhulu! Indincede kakhulu kuba bendingenalo nofifi lokuba ithetha ukuthini 😉
Francisco hanna sitsho
Ubunzima obuphambeneyo, bucace gca, ndiyayiqonda into kodwa ngoku ndiyayiqonda ngcono, enkosi kakhulu! 🙂
Ndine nod32, injani ???
UVinagrita omncinci sitsho
Enkosi. Undinike ulwazi ... super Imnandi kakhulu !!! KISSES ... Emva koko ndongeza into ... Kulungile?
icacile kwaye ichanekile.
Ulwazi olugqwesileyo, ndimtsha kwi-pc ndiyifumanisa eli hlabathi kwaye liyandichukumisa ndigcina i-notenook yam ikwimeko entle enkosi ngolwazi
Ngubani owaziyo malunga neefomathi zokwahlula-hlula i-16-32 NTFS "linux"?
Andinalwazi malunga ne-linux.
Hei iviniga, ndingayenza njani ipc yam ukuba ibaleke ngokukhawuleza?
Ndiyathetha, iifestile njengamaxwebhu wam e-mipc njl.
u-beuno sele ndiyichasile kodwa kuthatha ixesha elide ukuziqhekeza ukuba ufuna ukwazi into endiyichasayo nge-mindoft defrag ngethemba lokuba iyasiphucula isantya okanye andiyenzi kwaphela
Okwangoku ndiyayichitha kuba umdlalo endithe kuwo ukuphucula ukusebenza kwediski enzima kuye kwafuneka kuhluthwe. kakuhle ... kukujonga ukuba iphucula ukusebenza komdlalo.
umbuliso kunye nolwazi lulungile.
Molweni zihlobo, ndinenkcukacha kunye ne-hard disk ye-pc yam, kwenzeka ntoni ukuba ndisebenze kuyo nayiphi na isoftware kwaye emva kwemizuzu embalwa (imizuzu ihlala iyahluka) inkqubo yokusebenza (windows) ikhenkcisiwe, sele ndiyifomathile i-DD amatyeli aliqela, kwaye sele ndiyifakile i-OS emininzi, kwaye akukho nto inokuba yiyo, kwaye sele ndizijongile iinkumbulo zam kwaye zilungile, ndincede, nceda ..
Umhlobo ovakala ngathi yiVirus unika ikhompyuter yakho uphononongo olulungileyo.
Bueeh !!!! Ndineminyaka eli-13 ubudala .. ulwazi lundincede kakhulu kuba kufuneka ndihambise ulwazi lomsebenzi ngalo mbuzo !!!
Sawubona iviniga, unjani, enkosi kwii-quilombitos endibeka kuzo i-pc yam, kufuneka ndifunde yonke into, kangangoko ndinako, ndiyagula ngokungazi kwaye ndibhatale yonke into $$$$, ndiyithandile inkcazo kunye nezimvo zamakhwenkwe nazo, ndifuna ukukuhalalisela kwaye ndiyabulela ngokwenza ulwazi lwakho esidlangalaleni, ndivela eRosario, eArgentina, ndiyabulisa kubo bonke, qhubekeka ngoluhlobo, ndizokubona kungekudala.
Kutheni ungayibeki nje ukusetyenziswa kwaye ayisiyiyo yonke loo nto ingenamsebenzi ... ividiyo, imizobo ... njl.
Imibuliso evela ku aceitoo
Sisonke singenza isaladi
I-WAAA Iibhokhwe zihambile, ndiyiqonde ngokucacileyo
kubo bonke abo benze le ngcaciso ngenene
Ulwazi oluneenkcukacha kwi
ukusebenza kwediski enzima ...
z £ tnn € sitsho
Enkosi ngolwazi, ibiluncedo kakhulu kum. Bendingazi kakuhle ukuba loluphi na ulwaphulo-mthetho olusebenzayo, kwaye ndithembe, bekucacile.
h0la ukuya kwi-t0d0s
xa ndiyivula, indiphawula:
INGXELO NGOKUQINISEKILEYO KWIPROTOR KWI-HARD DRIVE: WDC WD600BEVS-60LAT0- (S1)
NDILUBONILE UKHETHO LOKUTSETYENZISWA KODWA ANDIZI UKUBA INDAWO YEEFILEYI ZIYA KUTSHINTSHA, NGAMAZWI AMABALWA UKUBA BASAZOJONGWA NA?
Nabani na onokundinceda angayixabisa kakhulu!
ENKOSI NGOMNIKELO WAKHO.
Ndicinga ukuba akunakwenzeka ukuba icace gca!
Ulwazi olulungileyo ngalo mzuzu ndiyichitha kwi-hard drive kwaye bendingazi nokuba ndenza ntoni haha. Ndiyayenza ngezixhobo zokulungisa isicelo esihle kakhulu
enkosi x ulwazi oluchazwe kakuhle nokuba umntwana angaluqonda xD
Enkosi ngengcaciso! Yayineenkcukacha kwaye kulula ukuyiqonda
UJose de la Rosa sitsho
enkosi ngazo zonke ezi ngcaciso huh
Awuyazi ukuba ziyikhonza njani ii-neophytes, sendivele ndayiqhekeza idiski yam kunye nayo yonke i-kosa, hey ndinike enye yeengcebiso ezisisiseko zethambo lam
Ewe, olu lwazi lundikhonze, kodwa ndinombuzo
malunga nenyanga edlulileyo bendifomatha i-hard drive yam ndishiye ilaptop yam isebenza ebusuku (defragmenting) xa ndiphakama bendingenalo ixesha lokuhlalutya izinto ezichaziweyo ndizicime, kodwa xa ndizama ukuyivula ngeeyure kamva yenzekile ukuba idiski yam ibisoloko iqala ngokutsha ngaphandle kokwazi ukuba iqhekeza elinzima kwaye xa ndicime izixhobo ndizonakalisile idiski enzima, andikhange ndibone ukhetho olunokubakho kunokufaka kwakhona iiwindows, ukufomatha kunye nokufaka i-xp kwaye ibisebenza nangona ingasebenzi kakhulu ngokugqibeleleyo.
Umbuzo wam kukuba ingaba ikhona indlela yokubuyisa iifayile zam ezilahlekileyo, endizilahleleyo ngelixa ndandifomatha, ukuba ndifuna ukuphazamiseka ngaphambili.
Molo, isihloko silunge kakhulu kwabo bangaziyo kwaye songeza kwabo bafuna ukuba i-pc yabo ikhawuleze, banokukhupha iinkqubo abangazisebenzisiyo kunye nokucima amaxwebhu abangafuni ukwandisa indawo yasimahla ye pc ukongeza kwitshekhi yayo yonke into ikhompyuter yakho yokuphelisa iintsholongwane endinayo kaspersky kwaye ilungile ukubulisa
Molweni nonke, bendifuna ukwazi into encinci, kutheni umatshini ucima, kunye nekhusi elihlaza okwesibhakabhaka? Masithi, ngequbuliso ndisebenzisa i-winamp kwaye kwiiyure ezimbalwa isikrini esiblowu sivele kwaye kufuneka ndiqalele phantsi ngamanye amaxesha iyaziqala kwakhona.
Kwaye kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwenzekile kum ukuba ndidlale umdlalo »IWarcraft 3 iTrone eFriziweyo«, ndaphinda ndazibuyisela ngaphandle, ngaphandle kwesilumkiso.
Ngaba umntu angandixelela ukuba inokuba yintoni ingxaki?
Molo, ndiyayichitha i-hard drive yam kodwa ekuqaleni kwipropathi yediski enzima ithi ndine-14.9 GB ihlala kwidiski enye, kwaye xa isiya kwi-30% ithi sele ndinayo i-16 GB , ungandinceda kwaye yiyo loo nto ENKOSI
Ewe kuyenzeka ukuba ufunde kwaye ngakumbi xa kuziwa kwi-pc okanye kwidiski enzima, ndiza kuyiphazamisa idiski yam enzima.Yintoni umntwana, ulwazi lulungile…. Enkosi
Enkosi kakhulu ngokuyichaza ngendlela elula, ndicacile 🙂
Ukuqhawula idiski kuyimfuneko kuyo yonke inkqubo yokusebenza. Ndivile ukuba iWindows Vista inamandla okuzikhusela ngaphandle kokuqala iwizard. Yintoni eyinyani kuloo nto?
Ukuzikhusela ukuba oko kulungile kunokwenziwa kwaye ikhompyuter yakho ayifumani monakalo, akunjalo? Kutheni okwangoku ndisenza into yokuhluthwa ngeewindows kwizixhobo zenkqubo
Ulwazi oluhle kakhulu.
UMarcos Cevallos sitsho
ilunge kakhulu le nto ipholileyo ...
Ndijonge umfana othandekayo onobuso
Enkosi ngolwazi. Ndikhonze kakhulu. Imibuliso evela eVenezuela
Izinto ezi-5 ekufuneka uzazi malunga neememes